Fanadiovana an’Antananarivo : ho hentitra andro aman’alina ny kaominina | NewsMada
Fanadiovana an’Antananarivo : ho hentitra andro aman’alina ny kaominina
Tsy hilefitra ny kaominina fa hiroso hatrany amin’ny fandaminana ny tanàna. Hovoakasiky ny fanadiovana avokoa ny sehatra rehetra.
Mitohy hatrany, ary mihamafy ny asa fanadiovana sy fandaminana ho fanalefahana ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Mifanome tanana amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny avy ao amin’ny prefektoran’ny polisy sy ny polisim-pirenena.
Ny boriborintany voalohany no nanohizana ny asa omaly. « Tsy hiato intsony izany fa vao mainka aza hohamafisina andro aman’alina, satria efa niarahan’ny maro nahatsapa sahady ny vokatra azo na ho an’ireo mpitondra fiara na ho an’ireo mpandeha an-tongotra », hoy ny delegen’ny boriborintany I, Razafimbelo Arinosy Jacques.
Nohamafisin’ny delege fa efa misokatra ho an’ireo mpivarotra kojakojam-pianarana nahazo alalana ny zaridainan’Ambohijatovo. Eo anoloan’ny Tranompokonolona Analakely kosa no natokana ho an’ireo mpivarotra Baiboly sy boky Masina.
Nampahatsiahivina ireo tompona magazay lehibe fa efa nisy ny fivoriana niarahan’izy ireo tamin’ny tompon’andraikitry ny boriborintany voalohany ny amin’ny tsy tokony hamelàny intsony ireo mpivarotra amoron-dalana hivarotra eo anoloan’ny magazay.
Ankoatra ny fanalàna mpivarotra tsy manara-dalàna mandehandeha sy amoron-dalana, miampy ireo fiarakodia mijanona amin’ny sisin-dalana tsy tokony hanaovana izany, mampitandrina ny besinimaro ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo fa voarara ny fivarotana fiara efa niasa manerana ny toeram-piantsonana eto an-dRenivohitra.
Fepetra horaisin’ny kaominina ny fampidirana “Fourrière” avy hatrany ireo fiarakodia mbola haranty eny amin’izany toerana voarara izany.
Rarana koa ny varotra anaty fiara tsy nahazoan-dalana eny amin’ny toeram-piantsonana. Voarara ny fivezivezen’ny posiposy sy sarety tarihin-tanana ary saretin’omby eto an-dRenivohitra manomboka amin’ny 6 ora maraina ka hatramin’ny 7 ora hariva (06h00->19h00). Fampidirana “fourrière” sy lamandy no sazy miandry ireo mbola minia mandika izany.
Mitohy hatrany koa ny asa fanisana ny fiarakaretsaka sy taxi-be ary havoaka tsy ho ela ny didim-pitondrana monisipaly mamaritra ireo fepetra tokony ho fantatra manodidina ny asa fitaterana an-tanàn-dehibe.